DAAWO-Arday maanta Shahaadooyin lagu Doonsiiyay. – Radio Muqdisho
Munaasabadaan oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa ahayd mid Shahaadooyin lagu gudoonsiinayay arday wax ka baratay Jaamacadda Soomaaliya,taas oo ay ka qayb galeen maamulka jaamacadda iyo marti sharaf kale.
Ardayda ayaa ka qalinjabiyay kuliyadaha Engineering-ka iyo Computer-ka oo ay muddo baranayeen, iyagoo soo bandhigay dareen kooda ku aadan sida ay ugu faraxsanyihiin in maaanta ay qaataan Shahaadooyin ka turjumaya wixii ay soo barteen.
Ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay Madaxa Xafiiska Waxbarashada ee Jaamacadda Soomaliya Prof Maxamed Nuur Warsame isagoo sheegay in arday baratay kuliyadaha Engineering-ka iyo Competer-ka ay u soo dhabar adeegeen marxalado kala duwan oo ay soo mareen intii ay waxbaranayeen, wuxuuna ku booriyay in ay bulshada Soomaaliyeed uga faa’iideeyaaan aqoonta ay leeyihiin.
Guddoomiyaha Jaamacadda Soomaliya Prof Cabdiraxmaan Macalin “Ablaal” ayaa ugu hambalyeeyay ardayda manta lagu doonsiiyay shahaadooyinka iyo aqoonta ay soo bandhigeen intii ay munaasabadda socotay ,isagoo ku dhiiri geliyay in ay xoogga saaraan waxbarashada guud ahaan dadka Soomaaliyeed.